သင်၏ Amazon Prime Video အဖွဲ့ဝင်ခြင်းကို မည်သို့ပယ်ဖျက်မည်နည်း။
25 / 11 / 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 2
OTT ပလပ်ဖောင်းများသည် ဖျော်ဖြေရေးနယ်ပယ်ကို ခေတ်သစ်တစ်ခုသို့ ဦးဆောင်နေပြီး ဈေးကွက်တွင် ရှေ့ပြေးများထဲမှ တစ်ခုမှာ Amazon ၏ ကိုယ်ပိုင် Prime Video Service ဖြစ်သည်။ မသိသေးသူများအတွက် Prime Video သည် စာရင်းသွင်းမှုပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် Amazon ၏ ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် Prime Video စာကြည့်တိုက်ရှိ အကြောင်းအရာအားလုံးကို လစဉ် သို့မဟုတ် နှစ်စဉ် စာရင်းသွင်းကြေးဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာကို အသုံးပြုသူ အလိုရှိသလောက် အကြိမ်များစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုရန်အတွက်လည်း ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
Prime Video အလုပ်လုပ်ပုံသည် သင်နေထိုင်သည့်နိုင်ငံအပေါ်အခြေခံ၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားပါသည်။ သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ United Kingdom နှင့် Germany တွင်နေထိုင်ပါက Amazon Prime စာရင်းသွင်းမှုကို အမှန်တကယ်မ၀ယ်ဘဲ Prime Video ဝန်ဆောင်မှုကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်၊ သို့သော်၊ သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်၊ အိန္ဒိယ၊ တူရကီနှင့် အီတလီကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် Prime Video ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန်အတွက် သင်သည် Amazon Prime စာရင်းသွင်းမှု အပြည့်အစုံ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် Prime Video ဝန်ဆောင်မှုကို တရုတ်ပြည်မကြီး၊ အီရန်၊ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဆီးရီးယားတို့မှ လွဲ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နေရာတိုင်းတွင် ရနိုင်ပါသည်။
streaming အကြောင်းအရာများ၏ အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် သင်၏အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုအပေါ်မူတည်၍ 4K အထိ မြင့်မားနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ ယခုအချိန်တွင် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းဖြစ်ပြီး၊ Prime Video သည် သင့်အား တောင်းဆိုနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ် Smart TV များသည် Amazon Prime Video အပလီကေးရှင်းကို ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောကြောင့် ရိုးရှင်းစွာဝင်ရောက်ပြီး အကြောင်းအရာကို စတင်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် ဝဘ်ဗားရှင်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ နောက်ထပ်အရာများကို ရယူရန်အတွက် Prime Video အက်ပ်ကို Echo Show နှင့် Fire TV ကဲ့သို့သော Amazon ၏ထုတ်ကုန်များတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
စမတ်တီဗီ သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် ကိရိယာမရှိသည့်တိုင် Prime Video ကို သင် ချိန်ညှိနိုင်သေးသည်။ ၎င်းသည် Sony ၏ လတ်တလော PlayStation5နှင့် Microsoft ၏ Xbox One စီးရီးများကဲ့သို့သော နာမည်ကြီး ဂိမ်းစက်များနှင့် အလုပ်လုပ်သည်။
ဘတ် သင်၏ Desktop ပေါ်တွင် Microsoft Teams ရရှိရန် မြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်း
သင်၏ Amazon Prime Video အဖွဲ့ဝင်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်လိုပါက မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။
အကယ်၍ သင်သည် Amazon Prime Video ပလပ်ဖောင်းတွင် လက်ရှိစာရင်းသွင်းသူဖြစ်ပြီး အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်၊ သင်သည် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ကမ်းလှမ်းထားသည့် အကြောင်းအရာကို မကျေနပ်ပါက၊ နောက်ဆက်တွဲကုန်ကျစရိတ်များကို ရှောင်ရှားရန် သင်၏အဖွဲ့ဝင်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
ဤသင်ခန်းစာတွင်၊ သင်၏ Amazon Prime Video စာရင်းသွင်းမှုကို သင်ပယ်ဖျက်နိုင်ပုံကို အဆင့်ဆင့်ပြသပါမည်။
အဆင့် 1. သင့် PC ရှိ ဝဘ်ဘရောက်ဆာကိုဖွင့်ပြီး Prime Video ဝဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ။
အဆင့် 2. ပင်မစာမျက်နှာတွင်၊ ညာဘက်အပေါ်ရှိ ပရိုဖိုင်အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 3. drop down menu မှ 'အကောင့်နှင့် ဆက်တင်များ' option ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် 4. သင်၏ Amazon အထောက်အထားများကို အသုံးပြု၍ လော့ဂ်အင်လုပ်ရန် သင့်အား အကြောင်းကြားပါမည်။ ရှေ့ဆက်ပြီး အလားတူလုပ်ပါ။
အဆင့် 5. သင်ဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့် ရရှိလာသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် Prime အဖွဲ့ဝင်ခြင်းတက်ဘ်ဘေးရှိ 'Edit on Amazon' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ သင်၏တရားဝင် Amazon ဝဘ်ဆိုက်ရှိ Prime အဖွဲ့ဝင်ခြင်းသို့ ယခုပြန်ညွှန်းပါမည်။
အဆင့် 6. အဖွဲ့ဝင်ခြင်းစာမျက်နှာတွင်၊ စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ဝင်ခြင်းတက်ဘ်အောက်ရှိ 'သင်၏ဆက်တင်များကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 7. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 'End Membership' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
သင့်ရွေးချယ်မှုကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် အဖွဲ့ဝင်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည် လစဉ်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါက၊ လက်ရှိလအတွက် အဖွဲ့ဝင်ခြင်းကို သင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်သည် နှစ်စဉ်အသင်းဝင်မှုအတွက် ငွေပေးချေထားပြီးဖြစ်ပါက၊ ထို့နောက် ကျန်ရှိသောသက်တမ်းအတွက် ၎င်းကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာကို ဝင်သုံးခွင့် မဆုံးရှုံးမီ။
လွန်ခဲ့သော Google Earth သည် မည်သည့် datum ကိုအသုံးပြုသနည်း။
နောက်တစ်ခု Disney+ တွင် အကြောင်းအရာမည်မျှကြာကြာခံမည်နည်း။